ကားမောင်းသူတွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၇)ချက် - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
ကားမောင်းသူတွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၇)ချက်
1 Hangatennis ball in the garage for easier parking.
အချို ့ကားသမားတွေကတော့ ကားပါကင်ထိုးတဲ့ အချိန်မှာ ကားရဲ့ ပွန်းပဲ့ခြင်းမရှိအောင် တင်းနစ်ဘောလုံးလေးတွေထားတာဟာ အလွန်ကိုကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။တင်းနစ် ဘောလုံးလေးတွေ ကားပါကင်မှာ ချိတ်ထားခြင်းဟာ အကွာအဝေးကို ခန့်မှန်း
ရလွယ်ပြီး မှားယွင်းပြီး မောင်းမိမှာလည်းမပူရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
2 Checking the gas quality.
ကားမှာရှိတဲ့ အသုံးပြု တဲ့ ဓာတ်ငွေ့ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးတဲ့ နည်းဟာလည်းအလွန်ကို အသုံးဝင်ပါတယ်။စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ဓာတ်ငွေ့အစက်ကလေး ချပြီး ၁ မိနစ်ခန့် စောင့်ကြည့်ပေးပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ စက္ကူဟာ အနည်းငယ်အစက်ပြောက်ကလေးထင်နေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သေချာပါတယ်။ဓာတ်ငွေ့ ထဲမှာ ရေနံဆီပါနေပြီဆိုတာပါပဲ။
နောက်တစ်နည်းကတော့ ပန်းကန်လုံး ရဲ့နောက်ဘက်ကို ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းဓာတ်ငွေ့ပန်းထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ကန်းလုံးနက်မှောင်လာပါက ဓာတ်ငွေ့မကောင်းတာဖြစ်ပြီး ဆက်လက်အသုံးပြု လျှင်ကားပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
3 Super fast car ventilation.
ကားစီးတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုရင် ဒါဟာ အနံ့အသက်တွေအတွက်အလွန်ကို အရေးပါလွန်းနေလို့ပါပဲ။ပထမဆုံးလေဝင်လေထွက်စစ်ဆေးဖို့အတွက် ကားတံခါးတစ်ချပ်ကို အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါ။ပုံမှာပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ကျန်တဲ့ တံခါးတစ်ချက်ကို ပုံပါအတိုင်း အနည်းငယ်ဟ ထားရုံပါပဲ၊အဲ့ဒီနည်းနဲ့ လေဝင်လေထွက်စနစ်ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
4 Checking the oil quality.
အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကားသမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကားကို
ဆီ အနေအထား ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ မကြာခဏဆိုသလို စစ်ဆေးတတ်ကြပါတယ်။ကားဆီစစ်တဲ့ နည်းလမး်ထဲကတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းစစ်ဆေးတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ကားရဲ့အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲပါက အောက်ဆီ ဟာ ခဏအတွင်းပဲ ပြတ်တောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဆီစစ်ဆေးတဲ့ နေရာမှာလည်း ၂ နည်းရှိပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကားစက်ပူနေတုန်း ဆီကို စစ်ဆေးတဲ့ ဂိတ်တံနဲ့ ထုတ်ယူပြီး စာရွက်ပေါ်မှာတင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် ၂ နာရီလောက် ကြပါက စာရွက်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဆီကို သေချာစစ်ဆေးရမှာပါ။ဆီ
မှာ မည်သည့် အစက်အပြောက်မျှမရှိပဲ ချောမွတ်နေပါက ကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒုတိယ တနည်းကတော့ စာရွက်ပေါ်တင်ထားတဲ့ ဆီမှာ အလယ်ကောင်က မီးခိုးရောင်ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရေပါနေပါပြီ။လဲလှယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
5A clever glasses holde
ကားသမားတွေမှာ မတော်တဆ သတိမေ့တာတွေ နဲ့ ကားကို သတိထားမောင်းရတာကြောင့် အခြားသောပစ္စည်းတွေကို ဂရုမစိုက်အားပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် မျက်မှန်တို့၊ကားပါကင်ထိုးတဲ့ အခါရတဲ့ တုံကင်တို့ကို ညှပ်ကလေးတွေနဲ့ ကားမျက်နှာကြက်မှာ ပုံထဲက အတိုင်း သိမ်းဆည်းသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ပြု လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကားမောင်းရာမှာစိတ်ချလက်ချမောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
6 Get rid of the bright Sun.
ကားမောင်းသမားအများစုဟာ သူတို့ ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ နေရောင်ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အကာအကွယ်တွေသုံးတတ်ကြပါတယ်။ဒါကလည်း ကားမောင်းသူရဲ့အတွေ့အကြုံအရ မျက်လုံးကို အာထွာ ရောင်ခြည်ကနေကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
7 Nail polish can almost completely hideasmall scratch on the car’s body.
အတွေ ့အကြုံရှိတဲ့ ကားသမားတွေကတော့ ကားပိုင်ဆိုင်ရတာဟာ မလွယ်ကူမှန်းသိပါတယ်။ကားနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်နဲ့ အမျှပြဿနာတွေလညး်ရှိနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ကားရှိတဲ့ သူတွေသတိထားသင့်တာတွေကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကားမှာ ခြစ်ရာ၊ပွန်းရာတွေဖြစ်ခဲ့ရင် အလွန်ကို ကသိကအောက်ဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကားမျိုးဟာ ရောင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း စျေးနှိမ်တာမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ကားမှာ လက်သဲရာကဲ့သိုခြစ်ရာတွေရှိပါက လက်သဲဆိုးဆေးလေးနဲ့အရောင်တူစွာ ပြန်လည် ခြယ်သသင့်ပါတယ်။
More in this category: « ကွန်ပျုတာအမြဲကြည့်နေရသူတွေအတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်း(၇)မျိုး အနာဂတ်တွင်တွေ့မြင်ရနိုင်မည့် လူမှုအိမ်ထောင်ရေးပုံစံ ၉ခု »